नेपाल इराकसँग ६-२ ले पराजित भएपछि प्रशिक्षकले दिए यस्तो प्रतिक्रिया — Sanchar Kendra
१कर तिर्न सरकारले दियो असार २५ गतेसम्मको समय
२प्रधानमन्त्रीले बोलाए विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को बैठक
३भारत उड्नै लाग्दा झलनाथ खनालले भावुक हुँदै ओलीलाई के भने ?
४थप २८२८ कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि, ५२ को मृत्यु
५गृहमन्त्रीको यस्तो कडा निर्देशनले देशैभर तरंग, सेनाको हेलिकोप्टर मनाङतर्फ उड्दै
६निरन्तरको वर्षापछि देशभर बाढी र पहिरो- कहाँ केकति क्षति भयो ?
७नयाँ दिल्ली उड्नुअघि झलनाथ खनालले ईश्वर पोखरेललाई छोडे यस्तो सन्देश
८भारत नै लानुपर्ने गरी खनालको स्वास्थ्यमा देखिएकाे समस्या के हो ?
९विपद व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको बैठकले गर्यो यस्तो निर्णय, उद्धार, राहत तथा उपचारमा जुट्न निर्देशन
१०नेपालमा बाढी-पहिरोको बितण्डा: यस्तो छ अहिलेसम्मको ताजा अपडेट, कहाँ-कहाँ के भयो ?
११तोलामा १५०० रुपैयाँले बढ्यो सुनको मूल्य, कतिमा भइरहेको छ कारोबार ?
१२नारायणी नदी इतिहासकै उच्च विन्दुमा, मेयर रेनु दाहालले दिईन यस्तो कडा निर्देशन
नेपाल इराकसँग ६-२ ले पराजित भएपछि प्रशिक्षकले दिए यस्तो प्रतिक्रिया
काठमाडौं । इराकसँगको मैत्रीपूर्ण खेलमा पराजित भएपछि नेपालका फुटबल प्रशिक्षक अबदुल्लाह अलमुताइरीले निराश नहुन आह्वान गरेका छन् । नतिजा राम्रो दिन नसक्नुको दोष आफूले लिने भन्दै उनले माफीसमेत मागे ।
खेल सकिएपछि प्रतिक्रिया दिंदै उनले भने, ‘सबैसँग माफी माग्छु, राम्रो रिजल्ट भए । हारको दोष म लिन्छु, खेलाडीलाई दबाब नदिनुस् ।’इराकको बसरास्थित अल फायना स्टेडियममा गएराति भएको खेलमा नेपाल इराकसँग ६–२ ले पराजित भएको थियो । नेपाली फुटबल टिमको प्रशिक्षण सम्हालेपछि अलमुताइरीको यो पहिलो खेल थियो ।
कुवेती प्रशिक्षक अलमुताइरीले राम्रो नतिजाका लागि केही समय धैर्य गर्न आग्रह गरे । उनले भने, ‘हामीले आज २ गोल गरेर खुशी मनायौं तर अब धरै खुशी बनाउँछौं । केही समय पर्खनुस्, हामी राम्रो गर्छौं । हामी विश्वकप छनोटका लागि तयार हुन्छौं ।’
राम्रो नतिजाका लागि केही समय चाहिने बताउँदै उनले भने, ‘हामीले आज एक अवसर गुमायौं । त्यो गोल भएको भए राम्रो हुन्थ्यो । केही सिल्ली मिस्टेक गर्दा खेल हारिन्छ, हामीलाई केही समय चाहिन्छ । जब हाम्रो लामो ट्रेनिङ हुन्छ हामी राम्रो रिजल्ट ल्याउँछौं ।’ डेब्यू खेलमा गोल गरेका मनिस डाँगीले राम्रो अनुभव हासिल गरेको भन्दै भविष्यमा अझै राम्रो खेल्ने बताए ।
इराकविरुद्ध नेपालको प्रदर्शन कमजोर
अन्तराष्ट्रिय मैत्रीपूर्ण फुटबल खेलमा नेपालले बलियो प्रतिद्धन्द्धी इराक विरुद्ध सन्तोषजनक खेल प्रदर्शन गरेको छ । गय राति इराकको घरेलु मैदानमा सम्पन्न खेलमा नेपालले ६ का विरुद्ध २ गोलको हार बेहोर्यो । हारका बाबजुद नेपालले २ गोल गर्नु राम्रो प्रदर्शन हो ।
डिफेन्स लाईन र गोलकिपर किरण चेम्जोङको गल्तीका कारण नेपालले सहजै ४ गोल खान पुग्यो । नेपालका मनिष डाँगीले एक गोल फर्काउदा इराकका अहमेद इब्राहिम खलाफले एक आत्मघाती गोल गरे ।
खेलको सातौं मिनेटमा कप्तान खासिनले २५ यार्डबाट फ्रिकिकमा गोल गर्दै इराकलाई अग्रता दिलाएका थिए । तर, आठौं मिनेटमा नेपालले बराबरी गोल फर्कायो । अन्जन बिष्टको प्रहार क्लियर गर्ने क्रममा इराकका खलाफले आत्मघाती गोल गरे ।
खेलको २९ औं मिनेटमा मनिषको गोलबाट नेपालले २(१ को अग्रता बनायो । तर त्यो खुसी धेरैबेर टिक्न पाएन । अन्तत इराकले लगातार ५ गोल थप्यो । दोश्रो हाफमा नेपालले केही राम्रो मुभ बनाउने प्रयास गरेको थियो ।
तर नेपाल दोश्रो हाफमा निक्कै दबाबमा देखियो भने इराक सहजतापूर्वक खेलिरहेको थियो । सन् २०२२ मा कतारमा आयोजना हुने फिफा विश्वकप तथा एसियन कप छनोट अन्तर्गत बाँकी खेलको तयारीका लागि नेपालले फिफा वरीयतामा १ सय ३ औं स्थान माथिको टिम इराकसँग उसैको घरेलु मैदानमा मैत्रीपूर्ण प्रतिस्पर्धा गरेको हो हो ।
यस्तै यता पोर्टोमा आयोजित रोमाञ्चक फाइनलमा म्यानचेस्टर सिटीलाई हराउँदै चेल्सीले दोस्रो पटक च्याम्पियन्स लिगको उपाधि जित्न सफल भएको छ । खेलमा काइ हाभर्टजको एक मात्र गोल निर्णायक बन्यो । पहिलो हाफको ४२ औँ मिनेटमा मेसन माउन्टको पासमा हाभर्टजले सिटीका गोलकिपर एडर्सनलाई छलाउँदै उत्कृष्ट गोल गरे ।
पहिलो पटक प्रतियोगिता जित्ने होडमा रहेको सिटीले प्रिमियर लिगमा जस्तै खेल प्रदर्शन गर्न सकेन । फाइनलमा बोल्ड टीम सेलेक्सन गरेका पेप ग्वार्डिओलाको योजना विफल देखियो । बार्सिलोनाका पूर्व प्रशिक्षकले फर्नान्डिन्हो र रोड्रीलाई बेञ्चमा राख्दै आक्रामक लाइनअपलाई मैदानमा उतारेका थिए । तर, उनीहरुको अनुपस्थितिमा टोलीले मिडफिल्डमा नियन्त्रण जमाउन सकेन ।
यता, गत सिजन पेरिस सेन्ट जर्मेनको नेतृत्व सम्हाल्दा फाइनल गुमाएका थोमल टुकलले भने यो सिजन चेल्सीलाई सन् २०१२ पछि पहिलोपटक च्याम्पियन्स लिगको उपाधि दिलाउन सफल भएका छन् । गत जनवरीमा चेल्सीको नेतृत्व सम्हाले यता टुकलले ग्वार्डिओलाको टोलीलाई हराएको यो तेस्रो पटक हो ।
प्रधानमन्त्रीले बोलाए विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को बैठक
थप २८२८ कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि, ५२ को मृत्यु
गृहमन्त्रीको यस्तो कडा निर्देशनले देशैभर तरंग, सेनाको हेलिकोप्टर मनाङतर्फ उड्दै
निरन्तरको वर्षापछि देशभर बाढी र पहिरो- कहाँ केकति क्षति भयो ?
विपद व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको बैठकले गर्यो यस्तो निर्णय, उद्धार, राहत तथा उपचारमा जुट्न निर्देशन
नेपालमा बाढी-पहिरोको बितण्डा: यस्तो छ अहिलेसम्मको ताजा अपडेट, कहाँ-कहाँ के भयो ?
तोलामा १५०० रुपैयाँले बढ्यो सुनको मूल्य, कतिमा भइरहेको छ कारोबार ?
नारायणी नदी इतिहासकै उच्च विन्दुमा, मेयर रेनु दाहालले दिईन यस्तो कडा निर्देशन